Jarmalka oo walaac ka muujisay xaaladda Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Jarmalka ayaa codkiisa ku biirayay dalalka reer galbeeda ee ka hadlay dagaalkii 19-kii bishan ka dhacay Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Jarmalka ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay xaaladda ka taagan hadda Muqdisho, iyadoo wax laga xumaado ku tilmaantay dagaalkii ka dhacay magaaladda 19-kii bishan.
Safaaradda Jarmalka ee Soomaaliya ayaa qoraal ku sheegtay in ay ugu baaqayso hogaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya inay ilaaliyaan deganaanshaha, islamarkaanka muujiyaan is-xakameyn, si looga baaqdo dagaal kale oo ka dhaca Caasimadda dalka.
Waxay dowladda Jarmalka sidoo kale ugu baaqday dhinacyada inay wadahadal ku dhameeyaan khilaafka ka taagan hirgelinta heshiiskii doorashadda 17-kii Sep 2020 lagu gaarey Muqdisho, kaasoo uu jebiyay Farmaajo.
Danta qaranka inay ka hormariyaan midooda gaarka ayaa loogu baaqay Madaxda dowladda iyo Musharixiinta Mucaaradka ee iclaamiyay inay Jimcaha qabanayaan banaanbax kale, iyadoo Xukuumadda ay mamnuucday isku imaatinta dadweynaha.